Ukutshutshiswa kweRashiya 2008
Ngo-2008 kwakuyiminyaka yokunqoba eRashiya. "UZenith" uzuze iNdebe ye-UEFA, uloyiso oluqaqambileyo kwiqela laseRussia yeqela leHockey eCanada. Iqela lebhola lebhola leRussia, ngokokuqala ngqa kwiminyaka engama-20, lifike kwii-14 zokugqibela ze-European Championship. IRashiya yaphumelela kwindawo yokuqala kwikhatywayo "i-Eurovision 2008", ngenxa yokunqoba kukaDima Bilan eMoscow iya kumkela intambo "Eurovision 2009". Abazange bahlale bucala baze batyebe imboni.
Iqela lokudala le-Golden League yaseRashiya lenze i-furor kwi-20 ye-International Congress, eyazinikezela kwimfashini yehlabathi, e-Rio de Janeiro. Abaphulaphuli baqhayisa ngokuma besiya kusebenza kwamastilisti ethu.
I-Rio de Janeiro iyidolophu yokuzonwabisa ephantsi kolunye lweendawo ezintle kakhulu emhlabeni. Kulo "mzi wecawa" ngokwenene, njengokuba abaseBrazil bawabizela, ekupheleni kukaMeyi isiganeko esikhulu kakhulu kwihlabathi lobugcisa bezinwele ezenzekayo, ehlelwe yi-Intercoiffure Mondial (intlangano ehamba phambili yabathengi abaphezulu) I-Intercoiffure Brazil kunye neBrazil yaseBrazil (Umboniso wobuhle, i-Hairdressing kunye ne-Aesthetics) , XX International Congress.
Isiganeko esinjalo sibanjwe kanye kwiminyaka emi-4 kumaziko enkcubeko kwilizwekazi ezahlukeneyo. Ababheki bee-Hairdress bevela kwihlabathi lonke bajonge iikholeji zabo kwiintlanganiso zeCalls, kwakunye nokunxibelelana kunye nentsebenziswano phakathi kwabaqeqeshi bee-salon zobuhle behlabathi.
Kulo nyaka, i-L'Oreal Professionnel kunye neWella Proffesionals - iinkampani ezimbini ezinkulu zezobugcisa-zenza njengabaxhasayo behlabathi elikhethekileyo kwi-20 yehlabathi ye-Intercoiffure Mondial.
Abanamathetheli abancinci babemelwa ngabachwephesha abakhulu abavela eItali, eJamani, eRashiya, eJapan, eChile, eBrazil, enyakatho yeYurophu, eBulgaria, e-Austria.
Ukusebenza kweqela laseRashiya elithi "Golden League" lacetywayo ukugqibela. UMongameli we-Intercoiffure Russia U-Alexander Mysin waqonda ukubaluleka kweRashiya kulo mboniso. Kwiinyanga ezintandathu, waqala ukulungiselela umboniso waseRussia. Umyili wezambatho wayengumcebisi osemtsha kunye neetalente zeLeeya Makarov. Ukubhala umbhalo kunye nokukhethwa kwefowuni kwanikwa umqondisi uNikolay Zatylkin, owaziwa kwiisangqa zezinwele. Kwaye, ke, amalungu ethu amangalisayo "e-Golden League" eRashiya, engenawo italente kunye namandla angenakuphikiswa, apho umboniso wethu awuyi kuba mkhulu kakhulu: u-Yegor Molodkin, uAlla Nikitina, uValery Lazarev, u-Anastasia Panasenko, u-Igor Kulakhmetov. Sekuqaleni ukusuka kumasekhondi okuqala iholo liyakubanda. Indlu yegolide yeetempileni, i-expanses ebanzi, ubukhulu baseRashiya bubekwe kwisikrini, kumangaliswa wonke umntu. Iqela lomdaniso "Mirage" limangalise abaphulaphuli ngokudibanisa kwamaLocon kunye nemidanso yaseRashiya kunye nenkcubeko yanamhlanje. Ukukhululwa kweemodeli ezimnandi kwaye kwaziswa ngokubetha ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, inxalenye enomdla kakhulu yemboniso yayisayi kuza. Umphumo wokugqibela weemodeli ezinobumba be-stylized kwiingubo ze-boyar kunye nemodeli ephakathi kunye nomhlobiso owenziwe ngeenwele zendalo, ezenziwe nguValery Lazarev, ngendlela yegolide yasekhaya leCathhedral kaKristu uMsindisi, wabangela isiqhwithi sokuqhayisa, abaphulaphuli beqhwaba ngokumemeza ukuvakalisa igama elithi "bravo", badibana ne "Golden League" Russia. Abakhandi baseRussia babevuyiswe ngempumelelo, bakha amaflegi aseRashiya ukusuka kwisiteji, bamkela iindwendwe ezivela kumazwe angama-52.
Inxalenye enkulu ye-XX International Congress yumboniso kunye neprogram yabantwana. Emva koko, umsebenzi oyintloko kunye ne-Intercoiffure Mondial, kunye ne-Intercoiffure yaseRashiya kukuxhasa nokukhuthaza isizukulwana esincinane. Kwaye kwahlelwa ukuvakasha kwiindawo eziphambili zaseRio: iNtaba iCorcovada, apho imfanekiselo odumileyo kaKristu uMsindisi, i-labyrinth eqhelekileyo yeziqithi kunye nedwala lasePan-de-Asukar (iRas de Asucar - Isonka). iisemina zemihla ngemihla kunye neeklasi. Ilizwe lethu lalihloniphekile ukumela abaphumeleleyo kwintcintiswano yaseRussia 2007. Amakhosi amabini abancinci, uNadezhda Krysenko kunye noKsenia Sivets, banethuba elingaqhelekanga lokuziwazisa umhlaba ngomsebenzi wabo kunye nokwenza isithunzi phakathi kolutsha lwehlabathi.
"Ndivuyisiwe kukuba kwakuyimbeko yam ukuzisa iRashiya kwiNgqungquthela. IRashiya lizwe elihle, kwaye ndicinga ukuba isitatimende sethu sibonise oku. Ndiyaziqhenya ngokusebenza kweqela lethu lokudala "Golden League". Ndiya kwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba abancinci abancinci banamathuba amaninzi okuphucula ubugcisa babo. Kwaye ndiyathemba ukuba abafana, abanethuba lokumela ilizwe lethu kwi-XX International Congress, baya kuthetha ngeminyaka emine njengenxalenye ye "Golden League" yaseRashiya, "kuchaza uAlexander Mysin. "Emva komboniso, safumana iimemo zokutyelela iiklasi eziza kwamanye amazwe. Siceba ukuqaphela oku kwenzeka kwisekusondele. "
Ikhadi lomsebenzi webhishini
Ukuba indoda ithi ayiqinisekanga ngobudlelwane
Umtshato onamandla kunazo zonke emhlabeni
Umqhubi wokuqhuba: iindlela ezili-9 zokuphepha ukhuseleko
Ukukhulelwa kwamabhinqa ebudaleni bokuzala
Inkukhu kwi-lame sauce
I talente yomculo kwabasetyhini abakhulelweyo
IJam esuka eparaphilile iipilisi
Indlela i-voluminetric inceda ngayo ukunciphisa umzimba
Silungiselela izitya ezisebenzayo kunye ezihlwabusayo kwimifuno yabantwana
Indlela yokukhusela impilo yakho kwimiphumo emibi yendalo
I-charter charm: i-wreath yeentyantyambo ezomileyo
I-cosmetology exotic okanye isiphi isiqhamo se-massage sinceda
Kungcono ukuhlamba umgangatho wepeyinti?
Ukusebenza emva kwekhefu lokubeleka
Unyango lwezilwanyana ze-atermic dermatitis
Iipropati zeoli yomsedare